Ecuador efuola 54% nke glaciers ya kemgbe 1980 | Netwọk Mgbasa Ozi
Ecuador efuola 54% nke glaciers ya kemgbe 1980
N'ihi okpomoku zuru ụwa ọnụ, glaciers gburugburu ụwa na-agbaze. Ugbu a, mkpuchi ice nke Ecuador jiri 54% belata kemgbe 1980, na-aga site na square kilomita 92 ruo kilomita kilomita 43 ugbu a.
Nnyocha nke Bolivar Cáceres nke Ecuador mere na Quito n'ime nzukọ nke ndị ọkachamara nke Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) na-ekpughe nnukwu data gbasara agbaze mmiri. You chọrọ ịmatakwu banyere ya?
1 Mbelata glacier mkpuchi Mbelata
2 Nzukọ IPCC
3 Ọganihu ngwa ngwa nke okpomoku ụwa
Mbelata glacier mkpuchi Mbelata
A na-atụle nguzo ice na Ecuador n'ụzọ dị otu a. Enwere mkpuchi mkpuchi gla asaa dị na ugwu mgbawa. Nke a na-egosi na e nwere asụsụ glaasi dị otu narị na iri. Mgbanwe ihu igwe nwere mmetụta ndị ọzọ na-adịghị mma n’ebe dị iche iche n’elu ụwa, ya bụ, ọ naghị emetụta ebe niile n’otu nha.
N’Ecuador, ihe ịrịba ama nke mgbanwe mgbanwe ihu igwe na-apụta ihe karịa mgbe a hụrụ ya na mpaghara a na 80s nwere glacier square kilomita 92, ebe ugbu a ọ bụ naanị square kilomita 43.
"Anyị nwere ọnwụ nke ihe dị ka pasent 54 nke mkpuchi glacier n'ime afọ 60. Ọ bụ ihe ngosi doro anya ma doo anya banyere etu glaciers si azaghachi mgbanwe ihu igwe ”, o kwuru, agbanyeghị na ọ na-enye oke maka mbelata ya na usoro usoro okike sitere na ugwu glaciers, nke“ ọrụ mmadụ mere ngwa ngwa ”.
N'ịbụ nke chere ọnọdụ ọnọdụ agbaze agbaze na-abịanụ na nsonaazụ ya na ịrị elu nke oke osimiri na ọkwa ụwa, Ndị ọkachamara IPCC si mba karịrị 30 gburugburu ụwa Ha ezutewo n'isi obodo Ecuador ịkọkọrịta ọmụmụ na nyocha emere na oke osimiri na oke mmiri, dịka ihe ngosi nke mgbanwe ihu igwe.
Nzukọ ahụ nwere ndị ọkà mmụta sayensị 125 sitere na IPCC na ndị sonyere na-eweta nyocha ha kwa izu n'ime oke osimiri na cryosphere. Ugwurugwu bu uzo nke uwa ebe mmiri di na onodu siri ike dika ice sea ma obu glaciers, na ihe ndi ozo di nkpa maka nyocha ihu igwe na nke ndi mmadu dabere.
Oke osimiri na cryosphere issue ọ aghọwo ihe dị mkpa nye ọtụtụ nyocha gburugburu ụwa, n'ihi eziokwu ahụ bụ na ha na-egosipụta nke ọma etu mgbanwe ihu igwe si emetụta n'ụzọ adịghị mma.
A na-atụ anya na a ga-ebipụta akụkọ a na Eprel afọ a ma nyere ndị gọọmentị aka ịme mkpebi mgbe ha na -emepụta atumatu dabeere na sayensị nke na-enyere aka ịkwalite akụ na ụba n'ọnọdụ ọnọdụ mgbanwe ihu igwe.
Ọganihu ngwa ngwa nke okpomoku ụwa
Onye America bụ Ko Barret, onye osote onye nchịkwa maka Nnyocha nke National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) na afọ iri na ise onye otu IPCC na-arụsi ọrụ ike nke ọ bụ onye osote onye isi, ekwenyela na okpomoku zuru ụwa ọnụ bụ ihe pụtara ìhè na n'oge a ọ nweghị uru ịjụ ya. .
“N’ezie enwere okpomoku, ihe ọmụmụ niile dị n’usoro a n’ime afọ iri atọ gara aga na-egosi Okpomoku di oku nke uwa nile”, Ọ na-ekwusi ike n'ihu ụfọdụ ndị ọkà mmụta sayensị na-ekwu na e nwere ebe ihe na-abụghị ihe ọhụrụ na-apụta.
Okwu ndị ọkà mmụta sayensị kwuru banyere okpomoku zuru ụwa ọnụ na-anwa ikpuchi ruo ókè o kwere mee, site n'ugwu ndị kasị kpụkọrọ akpụkọ ruo n'ebe dị omimi nke oké osimiri.
Offọdụ mpaghara ndị kachasị emetụta mgbanwe ihu igwe, dịka ụfọdụ mpaghara Arctic na ugwu ugwu dị elu, ka a ga-amụ banyere nke ọma, ebe ọ bụ na mbelata glaciers nwere ike bụrụ nsogbu n'ihi mmụba nke oke osimiri na ọkwa zuru ụwa ọnụ. Ndị a bụ mpaghara gburugburu ụwa na-enwe mgbanwe doro anya nke na-agbanwe ọhụụ niile a hụrụ ruo naanị afọ 50 gara aga.
Dịka ị pụrụ ịhụ, glaciers nke Ecuador na-agbaze na ọsọ ọsọ na nke a ga-enwe nsonaazụ dị egwu n'ọdịnihu dị nso.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Ecuador efuola 54% nke glaciers ya kemgbe 1980
Oke osimiri n bfe
Agwaetiti Balearic chọrọ iguzogide mgbanwe ihu igwe site na igbochi ụgbọ ala dizel site na 2025